Tenga Mini Isina Simbi Manual Kofi Grinder - Kutakurirwa Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
Mini Isimbi Simbi Yemanyoro Kofi Grinder
$96.99 Regular price $138.99
ruvara C2 Tsvuku C2 Bhuruu C2 Muchena C2 Black
Ngarava Dzinobva China Russian Federation
C2 Dzvuku / China C2 Bhuruu / China C2 Muchena / China C2 Nhema / China C2 Bhuruu / Russian Federation C2 Nhema / Russian Federation C2 Dzvuku / Russian Federation C2 Muchena / Russian Federation
Mini Isina Simbi Yemanyorero Kofi Grinder - C2 Tsvuku / China yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Iyo yekugadzirisa knob yeiyo C2 grinder yakagadziridzwa kuita simbi zvinhu. Timemore inotsiva iyo chitubu mukati meboka burr. Iyi yekutsiva yematsutso haina zvainoita pakukuya kushanda uye kuomarara kwekofi upfu hukobvu
Chigadzirwa Chigadzirwa: Nguva yakawanda Chestnut C2 Kofi yekukuya
Saizi: Muviri147mm x52mm,
Ruvara: Chena / Dema / Dzvuku / Bhuruu
Mubvunzo: Nei kujeka kuri pachena zvisina kuenzana kamwe kamwe?
A: Kutanga, ita shuwa kuti chivharo chepamusoro pamusoro pechibatiso chakasimba. Kana yakasununguka, edza kuitenderedza ichipesana newachi kusvikira yasimba. Kana isina kugadziriswa, taura nesu kuti uwane rumwe rubatsiro.
Mubvunzo: Nei chiyero chemubatanidzi chakanyanya kusununguka kugadzirisa iko kusimba?
A: Nekuti iyo chitubu kana iyo burrs inonamira. Edza kubata muviri uye zunza mubato zvishoma kusvikira iwe wanzwa kubaya, zvinoreva kuti chitubu kana burrs zvakasununguka. Kana zvisiri, edza kusunungura chivharo chiri pamusoro pekutakura uye tora burr yese yakamiswa. Chenesa iyo burr seti uye woiisa. Hatidi kutora mutoro kana vatengi vari kupokana neaya ziviso pamusoro.
Kubva paongororo dze 79
Zvese zvakanaka, fekitori zvigadzirwa, yunifomu kukuya, iyo tracker yakateedzerwa inononoka kupfuura iyo yekofi grinder yaive nenguva yekuenda. Dhirivhari isingasviki mavhiki maviri (Ukraine, Kharkov) Ini ndinoikurudzira kune wese munhu.
Stylish kavha, zvinhu, robhoti.
Yakanaka chigayo nemamaki asi isina kukodzera espresso
Yakauya pazuva rakatarwa, mhando yacho yakanaka, Melet sezvaidiwa, nekuti espresso yakakwana
Yakanaka chigadzirwa. Dhirivhari yakatungamira mazuva gumi nematanhatu. Kunyatsogutsikana nekupedzisa uye kukuya. Super inokurudzira!
Machenda anotarisa isu 4.9 / 5 inotarisana neongororo dze 120633.
Kugadzira Cartoon Chicken Ceramic Zai Yolk / Yakachena Separator
Spaghetti Strap Bodycon Lace Bhandige Mini Yakachena Mapfekero
Chipfeko chakanaka uye jira racho rakanakisa mhando randinokurudzira